Waa maxay sababta ay Dilalka ka dhacaya Muqdisho u sii kordheen Bishan Ramadaan? – XOGMAAL.COM
Waa maxay sababta ay Dilalka ka dhacaya Muqdisho u sii kordheen Bishan Ramadaan?
Dad fara badan ayaa lagu dilay degmooyinka kala duwan ay ka kooban tahay Muqdisho inta lagu guda jiro Bishan Barakeysan ee Ramadaan.
48-kii saac ee la soo dhaafay ayaa meelo kala duwan oo Muqdisho ah waxaa ka dhacay dilalmana muuqato talaabooyin falalkaasi looga hor tagayooo ay qaadayaan ciidamada ammaanka.
Kooxo hubeysan ayaa Isgoyska Bakaaraha ee Muqdisho waxaa ay ku dileen labo Wiil oo dhalinyaro ah.
Sidda ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka degaanka Kooxo hubeysan ayaa toogtay labadaasi dhalinyarada ka dibna Waxaana la sheegay in ay isaga Baxsadeen goobta
Dhalinyarada la dilay aya ka shaqaysan jireen boosteejada Suuqa Bakaaraha oo gaadiidka BLka ay ka qaadi jireen lacagta.
Dhinaca kale Askari ka tiran ciidanka dowladda ayaa degmada Kaaraan ku dilay Darawal kaxeynayay gaari BL-ah, kadib markii askariga uu Darwalka ku amray inuu istaago intaasi kadibna uu xabad ku riday, isla goobta ayuuna ku geeryooday.
Sidoo kale xalay fiidkii ayaa aagga xaafada Suuq Bacaad ee degmada Yaaqshiid waxaa koox hubeysan ay ku dileen laba wiil oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo ka mid ahaa dhalinyarada degaanka sida daweyna looga garanayay.
Sidoo kale Haweeney ayaa xalay lagu dilay xaafada Siigaale oo ka tirsan degmada Hodan ka dib markii ay rasaas ku fureen rag bastoolado ku hubeysan,
Ciidamada Ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa sida caadda u ah gaaray goob kasta uu dilku ka dhaco waxaana ay sameeyaan baaritaano ay natiijadoodu halka ay u dambeyso aan la aqoon.
Halka kooxda dilka geysatana warkooda lagu soo kobo wey baxsadeem
24-kii saac ee la soo dhaafay Waxaa si wayn loo adkeeyay ammaanka Magaalada Muqdisho, iyadoo wadooyinka qaar ee Magaalada la soo dhoobay ciidamo badan oo dowladda ka tirsan, balse Hay’adaha ammaanka waxay u muuqdaan kuwo xakameyn la’ dilalka dhacaya.
Hadal heynta ugu badan ee Caasimada ayaa ah in dadku ay is weydiinayaan sababta ay Bishan Barakeysan ee Ramadaan ay usii kordhayaan dilalka dhacaya?
Mar kale ayuu Hogaamin doonaa Masar Abdel Fattah Al-Sisi oo la dhaariyaya.
Diyaarad u gacan gashay Al-shabaab ka dib markii ay ku soo dhacday deegaanka….